Qarax ka dhacay dalka Yemen oo 40 ruux dilay - Worldnews.com
Qarax ka dhacay dalka Yemen oo 40 ruux dilay
Ugu yaraan 40 ruux ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xarun millatari oo ku taalla magaalada koonfureed ee Cadan, sida ay saraakiishu sheegeen.
Xarun tababar ama dhisme ay isticmaalayeen malayshiyo dawladda taageersan oo caan ah ayaa la
Qarax weyn oo khasaare naf iyo maalba leh dhaliyay oo ka dhacay caasimadda Fransiiska ee Paris+Khasaaraha+Sawirro
Qarax weyn oo khasaare naf iyo maalba leh dhaliyay oo ka dhacay caasimadda Fransiiska ee Paris+Khasaaraha+Sawirro Qarax aad u weyn islamarkaana dhaliyay khasaare naf iyo...
Qaran News 2019-01-12
Muwaadin Mareykan ah oo lagu dilay weerarkii Hotel-ka Nairobi
NAIROBI, Kenya - Mas'uul ka tirsan wasaarada arrimaha dibada Mareykanka ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP in Muwaadin Ameerikaan uu kamid ahaa dadkii lagu dilay...
Gareowe Online 2019-01-16
Al Shabaab oo sheegatay weerar ka dhacay Dalka Kenya
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayay ku sheegatay weerar aad u xooggan oo ka socda magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya. Al Shabaab waxay sheegtay in...
AL SHABAAB oo sheegatay mas'uuliyadda weerarka Nairobi
NAIROBI, Kenya - Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka ka socda dhismaha Riverside, oo ka kooban Hotel lagu magacaabo Dusti iyo xafiisyo, oo ku yaalla...
Gareowe Online 2019-01-15
14 ruux ayaa ku dhimatay weerar ay mas'uuliyaddiisa sheegatay Al Shabaab oo Talaadadii ka dhacay Nairobi, wuxuuna ka mid noqonayaa weerarro horay u gilgilay Kenya oo ay kooxdan ka dambeysay. Subaxnimadii Arbacada ee saaka ayaa lasoo afjaray weerarkan, sida uu shaaciyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Dabayaaqadii sannadkii 2011-kii ayey Al Shabaab sare u qaadday...
Qarax culus oo ka dhacay Beledweyne iyo wararkii ugu dambeeyay
MUQDISHO, Soomaaliya - Qarax culus ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne, ee xarunta gobolka Hiiraan, bartamaha dalka Soomaaliya. Goobjooge la hadlay Warsidaha Garowe Online ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay miino lagu aasay meel ku dhaw saldhigga Booliska magaalada, waxaana wararka hordhaca ah ay...
Dad isku qarxin rabay maxkamad oo Pakistan lagu laayay
Ugu yaraan hal qareen ayaa dhintay kuwo kalana way dhaawacmeen ka dib markii la weeraray maxkamad ku taala waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan, sida ay sarakiishu sheegeen. Saddex ruux oo rabay in ay is qarxiyaan ayaa la dilay iyaga oo qorshaynayay in ay gudaha u galaan maxkamad ku taala agagaarka Tangi ee degmada Charsadda, sida ay warbaahinta deegaanku ka soo xigteen...
Khasaare ka dhashay Qarax ka dhacay Muqdisho
MUQDISHO, Somalia - Fahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar Qarax loo adeegsaday xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, ee caasimadda Somalia. Weerar loo adeegsaday Bam Gacmeed ayaa lagu qaaday Guriga Muqdisho uu ka degan yahay Gudoomiyaha degmada Deyniile Jacfar oo ku yaalla degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir. Ugu yaraan Saddex ruux oo labo ka mid ah ay yihiin...
Khasaarihii ugu horeeyay Qaraxyo iyo weerar lagu qaadey Hotel ku yaalla Nairobi
NAIROBI, Kenya - Weerar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar qaraxyo ku billowday oo lagu qaadey Dhismo Hotel iyo Dukaamo ka kooban oo ku yaalla galbeedka magaalada Nairobi, ee caasimadda dalka Kenya. Labo qarax ayaa la maqlay iyadoo ay xigtay rasas ka dhacaysa Hotel-ka Dusit, iyadoo sawirro laga soo qaadey goobta ay muujinayaan gawaari dab qabsaday iyo dad laga soo saarayo....
Ciidamada Puntland oo Qarax lagula eegtay duleedka Boosaaso
BOOSAASO, Puntland - Hal Askari oo katirsanaa ciidamada Puntland ayaa ku dhintay, saddex kalena dhaawacyo kala duwan ayaa kasoo gaarey Qarax miino oo ka dhacay gobolka Bari, shalay gelinkii dambe. Qaraxa oo ahaa miino wadada qarkeeda lagu aasay lala eegtay ciidamadda xilli howlgal roondo ah ku marayeen Toga Bali-khadar oo cirifka ku haya Buuralayda Galgala, halkaasi oo Al...